ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက် ဟုတ်ကဲ့ (သို့) ဟုတ်ကဲ့ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အချက် ၃ ချက် Absolut ခရီးသွား
Absolut ခရီးသွားခြင်း | 13/12/2021 11:59 | အဆင့်မြှင့်တင် 15/12/2021 12:04 | အခြားသူများကို
ယခုအခါတွင် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေများမှာ နှေးကွေးနေပုံရသည်။ ပုံမှန်ပြန်သွားပါ။ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် လာမည့်အားလပ်ရက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် များစွာသောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည့် ခရီးတစ်ခုထွက်ရန် မိမိကိုယ်ကို ပြင်ဆင်နေကြပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ဖြတ်သန်းသွားရမယ့် ခရီးသွားလမ်းကြောင်းကို သေချာစီစဉ်ရမယ်။ နေရာများနှင့် ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများ ငါတို့သွားမယ့်နေရာက အရေးကြီးဆုံးပဲ။
1 အိတ်ထဲမှာ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အရာ ၃ ခု
1.1 သင်ဝတ်မယ့်အဝတ်အစားတွေကို ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ပါ။
1.2 သင်၏ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကို မမေ့ပါနှင့်
1.3 တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုကို အာမခံသော ထုတ်ကုန်များ
အိတ်ထဲမှာ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အရာ ၃ ခု
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် နောက်တစ်ချက်မှာ ခရီးစဉ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆောင်ရမည့် အရာများဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်မှုတွေ အများကြီးရှိတော့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြီးသွားပါပြီ။ လွှမ်း နှင့်ထုပ်ပိုး မှားပြီး နောက်ဆုံးမိနစ်. ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ခရီးထွက်ဖို့ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အချက် ၃ ချက်.
သိသာထင်ရှားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှိရမည်။ မှန်ကန်သောအဝတ်အစား ခရီးသွားဧည့်သည်များ တတ်နိုင်သမျှ သက်တောင့်သက်သာ သွားလာနိုင်ရန်။ ငါတို့ဝတ်မယ့် အတွင်းခံတွေအပြင်၊ ငါတို့တွေ့မယ့် ရာသီဥတုနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်- မင်းစောင့်ရင်၊ အပူချိန်နိမ့်လက်အိတ်များ၊ ဦးထုပ်များ၊ ပဝါများနှင့် အင်္ကျီများကို ပြင်ဆင်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်၌ စောင့်လျှင် တကယ်ပူပါစေ။ သင်၏ခရီးတွင်၊ သင့်ကိုယ်သင်လက်ဖြင့်ကိုင်ပါ။ ဘောင်းဘီတိုရှပ်အင်္ကျီနှင့် စာလုံးစွပ်အင်္ကျီများ။ အနီးအနားမှာ ကမ်းခြေရှိရင် မင်းရဲ့ ရေကူးဝတ်စုံကို မမေ့ပါနဲ့။
သင့်ခရီးဆောင်အိတ်အတွင်း သယ်ဆောင်ရန် အဝတ်အစားရွေးချယ်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ရွေးချယ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဝတ်အစားအစုံ သင်အသုံးပြုသည့်နေ့ရက်များအတွင်း ကွဲပြားနိုင်သည်။ ကြာကြာနေထိုင်ပါက တီရှပ်၊ ဘောင်းဘီ၊ ဖိနပ်မျိုးစုံကို ကောင်းကောင်းဝတ်ပါ။
သင်၏ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကို မမေ့ပါနှင့်
နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် အလွန်အသုံးဝင်သော အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ မြောက်များစွာကို တိုးမြင့်လာစေခဲ့သည်။ ကိုကျော်ဖြတ်ခြင်း။ စမတ်ဖုန်း ၎င်း၏အားသွင်းကိရိယာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးဆောင်အိတ်တွင် ကင်မရာ၊ လက်ပ်တော့တစ်လုံးနှင့် ဘက်ထရီကုန်သွားသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများကို အားပြန်သွင်းမည့် ပြင်ပဘက်ထရီကို သယ်ဆောင်သွားကြောင်း သေချာစေရပါမည်။
ဤစက်ပစ္စည်းများကို သယ်ယူရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ သူတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးထုပ်ပိုးပါ။ သယ်ယူစဉ်အတွင်း ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ သူတို့ရဲ့ အကာအကွယ်ကို အာမခံဖို့ သူတို့ကို သင့်ရဲ့ အိတ်ဆောင်အိတ် ဒါမှမဟုတ် သီးခြားကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ ဆောင်ထားဖို့ ကြိုးစားပါ။ သင့်လက်ကိုင်အိတ်ထဲတွင် ၎င်းကို သယ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ခံစားရပါက ၎င်းတို့ကို သေချာထည့်ထားပါ။ အလယ်ပိုင်း ခရီးဆောင်အိတ် ဧရိယာ.
တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုကို အာမခံသော ထုတ်ကုန်များ
ဖြစ်နိုင်ချေများသောအားဖြင့်၊ သင်သည် သင်၏ ခရီးသွားနေရာသို့ ရောက်သောအခါတွင် သင်သည် တည်းခိုရလိမ့်မည်။ ဟော်တယ် ၎င်းသည် ၎င်း၏ဖောက်သည်များကို အမျိုးအစားအားလုံးကို ပေးဆောင်သည်။ သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ. သို့သော်၊ နေရာထိုင်ခင်းတွင် မည်သည့်ကိရိယာများ ပါဝင်မည်ကို သင်သေချာမသိပါက သို့မဟုတ် သင်သိသော်လည်း အချို့သောအခြေခံအချက်များ ပျောက်ဆုံးနေပါက သင်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ကပ်အိတ် သက်ဆိုင်ရာ ခရီးဆောင်အိတ် - သွားပွတ်တံ၊ အနံ့ဆိုးထွက်ဆေး၊ အစိုဓာတ်ထိန်းဆေး၊ သုတ်ဆေး၊ ဆပ်ပြာ ... အစရှိသည်ဖြင့်။
၎င်းတို့သည် အာမခံချက်ရှိသော ထုတ်ကုန်များဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းရေး ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအသီးသီးမှ ၎င်းတို့သည် လုံလုံလောက်လောက်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရမည်။ ကောင်းစွာသိမ်းဆည်းထားသည်။ ညစ်ပတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်။ ကုန်ပစ္စည်းဗူးများတွင် မလိုအပ်သော်လည်း ၎င်းတို့ကို ဖမ်းမိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ၎င်းတို့ကို သီးခြားအိတ်များဖြင့် ပို့ဆောင်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ဖုန်နှင့်အစိုဓာတ်.
ခရီးဆောင်အိတ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပေမယ့် ခရီးသွားတဲ့အခါ စိတ်အေးအေးထားသင့်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ကောင်းပါတယ်။ အိမ်ပြန်အာမခံ ဘယ်ဟာလဲ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ခိုးယူမှုနှင့် အခြားဖြစ်ရပ်များမှ သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ပါ။ သင်၏အားလပ်ရက်များအတွင်း။ ရရှိနိုင်သောမူဝါဒကမ်းလှမ်းချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် မမေ့ပါနှင့်၊ ရွေးချယ်ရန် စျေးနှုန်းများနှင့် အကျုံးဝင်မှုတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ၊ ထို့ကြောင့် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံးကို ရွေးချယ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက် ဟုတ်ကဲ့ (သို့) ဟုတ်ကဲ့ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အရာ ၃ ခု